कोरोनाबिरु’द्ध लड्न अमेरिकाले गरिदियो यस्तो घोषणा — Sanchar Kendra
१काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लम्ब्याइदै
२पदभार सम्हालेकाे २४ घण्टा नबित्दै गृहमन्त्री अधिकारीले चाले यस्तो कदम, ७७ वटै जिल्लालाई गयो सर्कुलर
३दाङको तुल्सीपुरमा गो’ली चल्यो, १ युवक पक्राउ
४सञ्चारकेन्द्रका समाचारहरु अव मेरो कुंडली एपमा पनि
५राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त
६आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
७बालुवाटरमा प्रदर्शन गर्ने नागरिक अगुवामाथि धरपकड, नारायण वाग्ले रखगेन्द्र संग्रौलासहित १८ जना पक्राउ
८कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने रामदेवको घोषणा
९सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने
१०सर्वोच्चले आफ्नै परमाधेशविपरीत अन्तरिम आदेश दियो- मुख्यमन्त्री पोखरेल
११विश्वकप छनोटमा नेपालले आज अष्ट्रेलियाको सामना गर्दै
१२कोरोनाविरूद्धकाे १० करोड डोज खोप दिने बेलायतको घोषणा, क-कसले कहिले पाउछ ?
एजेन्सी । चीनको वुहानबाट फैलिएको भनिएको कोरोना भाइरस कोभिड-१९ ने अहिले विश्वका अधिकांस देश आक्रान्त बनेका छन् । सारा विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अर्को नयाँ घोषणाले विश्व नै तरंगित बनेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी जुनको अन्तिमसम्ममा संसारका विभिन्न मुलुकलाई कोरोनाविरूद्धको ८ करोड डोज खोप दिने घोषणा गरेका छन्।
यसअघि नै अक्सफोर्ड/अष्ट्राजेनेकाले बनाएको ६ करोड खोप अरू मुलुकलाई दिने बताएको अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले सोमबार थप दुई करोड डोज खोप पनि दिने बताएका हुन्।
‘हाम्रो मुलुक बाँकी संसारका लागि खोपको आर्सनल हुँदैछ,’ ह्वाइट हाउसमा बाइडेनले भने,‘जति चौडा सागरले पनि र जति अग्ला पर्खालले पनि हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन। अन्धाधुन्ध फैलिरहेको रोग र मृत्युले ती मुलुकलाई अस्थिर त बनाउँछ नै हामीलाई पनि खतरामा राखिरहन्छ।’
अमेरिकामा अहिलेसम्म फाइजर, मोडेर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपलाई प्रयोग अनुमति दिइएको छ भने अक्सफोर्ड/अष्ट्राजेनेकाको खोपलाई अनुमति दिइएको छैन। अमेरिकाले यसअघि अक्सफोर्ड/अष्ट्राजेनेकाको ४० लाख डोज खोप मेक्सिको र क्यानडालाई दिएको थियो।
बाइडेनले अमेरिकाले अब रूस र चीनले भन्दा बढी खोप अरू मुलुकलाई दिने र खोपको बदलामा मित्र राष्ट्रहरूसँग कुनै ‘सहयोग’ नमाग्ने बताए।
कुन-कुन मुलुकले खोप पाउँछन् भन्ने ह्वाइटहाउसले खुलाएको छैन। बाइडेन प्रशासनले आगामी दिनमा कुन मुलुकमा खोप पठाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ। बाइडेनले गत साता संसारका ४० प्रतिशत देशबाट नेताहरूले खोपको लागि आफ्नो प्रशासनलाई सम्पर्क गरेको बताएका थिए।
ती मुलुकहरूलाई ८ करोड डोज खोप दिने बाइडेनको घोषणालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का प्रमुख टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेसुसले स्वागत गरेका छन्। उनले खोप वितरणका सहयोग गर्न कोभ्याक्स तयार रहेको पनि बताएका छन्।